Ny fiteny dia fitaovana fifandraisana izay mahatonga antsika olombelona.
Ny fiteny - fiteny manokana iray manokana - dia manondro ny fitsipi-pitenenana sy fitsipika sy fitsipika hafa izay mamela ny olona hilaza teny sy feo amin'ny fomba azon'ny olona takarina, hoy ny fanamarihan'i John McWhorter, manam-pahaizana momba ny teny anglisy sy ny literatiora mifanaraka amin'ny Columbia University. Na, araka ny voalazan'i Guy Deutscher amin'ny asany, "Ny fametrahana ny fiteny: fizarana evolisiona amin'ny fampitaovana lehibe indrindra amin'ny olombelona," dia ny hoe "inona no mahatonga antsika olombelona." Ny fikarohana izay fiteny dia mitaky fijery fohy avy amin'ny niandohany, ny evolisiona nandritra ny taonjato maro, ary ny anjara asany manan-danja eo amin'ny fisian'ny olombelona sy ny evolisiona.
Fanadihadiana lehibe indrindra
Raha fiteny tena lehibe indrindra amin'ny olombelona ny fiteny, dia maneso be izy io fa tsy tena noforonina mihitsy izy io . Raha ny marina, ny Deutscheer sy McWhorter, roa amin'ireo linguist malaza indrindra eran'izao tontolo izao, dia milaza fa ny fiandohan'ny fiteny dia mbola mistery amin'izao fotoana izao tahaka ny tamin'ny andron'ny Baiboly.
Tsy misy olona, ​​hoy i Deutscher, no nahazo fanazavana tsara kokoa noho ny tantaran'ny Tilikambon'i Babela , iray amin'ireo tantara mampalahelo sy manan-danja indrindra ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny tebika ara-baiboly, Andriamanitra-mahita fa ny olona teto an-tany dia nanjary nahay nanorina ary nanapa-kevitra ny hanangana tilikambo fanompoan-tsampy, dia tanàna iray manontolo, tany Mezopotamia fahiny izay naninjitra ny lanitra-nampiova ny taranak'olombelona tamin'ny fiteny tsy fantatra ka tsy afaka nifampiresaka intsony izy ireo, ary tsy afaka nanorina trano be intsony izay mety hisolo ny Tsitoha.
Raha tsy apokrifa ilay tantara, tsy misy dikany ny dikany, araka ny nolazain'i Deutscher:
"Matetika ny fiteny no toa misongadina toy izany, ka sarotra aminy ny mieritreritra hoe toy ny zavatra hafa tsy vitan'ny asa tanana tsara tarehy izy io. Ahoana koa no ahafahan'ny ankamaroan'ny fitaovana manamboatra feon-tsakafo telo eo ho eo? - i, f, b, v, t, d, k, g, sh, a, e ary toy on-amount amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny kibay kely sasantsasany, splitters, feo tsy misy dikany, tsy misy fahafahana maneho, tsia hery hanazava. "
Fa, raha toa ianao ka mihazakazaka ireny feo ireny "amin'ny alàlan'ny kodiarana sy ny kodiarana amin'ny milina", hoy i Deutscher, mandamina azy ireo amin'ny fomba manokana ary mamaritra ny fomba amam-pitsipika azy ireo amin'ny fitsipi - pitenenana , manana fiteny tampoka ianao, zavatra iray misy vondrona iray manontolo ny olona dia afaka mahatakatra sy mampiasa ny fifandraisana - ary indrindra ny fiasa sy ny fiaraha-monina mahasoa.
Raha toa ka tsy manazava ny dikany ny fitenin'ny fitenin'ny fiteny, dia mety hanampy amin'ny fitaterana an'olom-pirenena malaza indrindra ao amin'ny Tandrefana ilay izy: sady Noam Chomsky. Chomsky dia malaza fa ny anaran- tsolika iray manontolo (ny fianarana ny fiteny) dia nomena anarana manaraka azy. Ny fitenim-pitenenana Chomsky dia fitenenana malalaka ho an'ny fitsipiky ny fiteny ary ny fomba fampianarana fianarana teny nampidirina sy / na nalaza tamin'ny Chomsky tamin'ny asa toy ny fitrandrahana toy ny "Syntactic Structures" (1957) sy "Aspects of Theory of Syntax" (1965).
Saingy, angamba ny asa sarobidy indrindra nataon'i Chomsky ho an'ny adihevitra momba ny fiteny dia ny lahatsoratrany 1976, "Momba ny natioran'ny fiteny." Ao anatin'izany, i Chomsky dia mivantana mivantana ny dikan'ny fiteny amin'ny fomba iray izay nampisongadina ny fanambarana nataon'ny Deutscheer sy McWhorter tatỳ aoriana.
"Ny toetoetran'ny fiteny dia heverina ho toy ny asan'ny fahalalana azo [...] [T] ny fahaizany ny fahaiza-miteny dia azo raisina ho toy ny asam-panamafisana, ny toetoetran'ny karazana, singa iray ao amin'ny sain'ny olombelona, ​​asa iray izay mametraka ny traikefa amin'ny fitsipi-pitenenana. "
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fiteny dia fitaovana iray ary ny rafitra izay mamaritra ny fomba ifandraisantsika amin'izao tontolo izao, ny tsirairay, ary, na dia amin'ny tenantsika aza. Ny fiteny, araka ny nomarihina, no mahatonga antsika olombelona.
Fanambarana ny maha-olombelona
Ilay poeta Amerikana malaza sady mpandala ny nentim-paharazana, Walt Whitman, dia nilaza fa ny teny dia ny habetsahan'ny zavatra niainan'ny olombelona amin'ny karazana:
"Ny fiteny dia tsy fanamboarana ny fianarana, na ny mpanamboatra rakibolana, fa zavatra avy amin'ny asa, ny filàna, ny fifaliana, ny fifankatiavana, ny tsirony, ny taranaka maro nifandimby, ary ny fototra iorenany sy ambany, amin'ny tany. "
Ny fiteny àry dia ny habetsahan'ny traikefa rehetra niainan'ny olombelona nanomboka tamin'ny fiandohan'ny olombelona. Raha tsy misy ny fiteny dia tsy ho afaka hilaza ny fihetseham-pony, ny eritreriny, ny fihetseham-pony, ny faniriany ary ny zavatra inoany ny olona. Raha tsy misy ny fiteny dia tsy misy ny fiaraha-monina ary mety tsy misy fivavahana.
Na dia tezitra amin'ny fiteny maro manerana an'izao tontolo izao aza ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fanorenana ny Tilikambon'i Babela, dia mbola misy fiteny, fiteny izay azo zaraina, nianatra, nandika, nanoratra, ary nifandray.
Rehefa mifampiresaka amin'ny olona ny ordinatera-ary amin'ny hafa dia mety hiova ny dikan'ny fiteny. "Resadresaka" amin'ny ordinatera amin'ny alalan'ny fampiasana ny fiteny fanoratana . Tahaka ny fitenin'ny olombelona, ​​ny fiteny amin'ny ordinatera dia fitsipi-pitenenana sy fitsipika ary fitsipika hafa izay ahafahan'ny olona mifandray amin'ny PC, ny tablette ary smartphones, ary mamela ny solosaina hifandray amin'ny ordinatera hafa.
Satria ny fandrosoana amin'ny aterineto dia manohy mandroso mankany amin'ny toerana ahafahan'ny ordinatera mifampiresaka nefa tsy misy ny fidirana an-tsehatra amin'ny olona, ​​dia mety hivoatra ihany koa ny famaritana ny fiteny. Ny fiteny dia mbola ho tonga hatrany amin'ny maha-olona antsika, saingy mety ho lasa fitaovana ahafahan'ireo milina mifampiresaka, manambara ny filany sy ny zavatra ilainy, mamoaka torolàlana, mamorona, ary mamokatra amin'ny alalan'ny fiteniny. Ny fiteny dia ho lasa zavatra natsangan'ny olombelona tamin'ny voalohany, saingy avy eo dia lasa amin'ny rafitra fifandraisana vaovao-izay tsy misy fifandraisana firy amin'ny olombelona.
Fahaiza-misaina voafaritra mazava sy ohatra
Manapoizina ny fahalavoana
Fahatapitry ny fandaminana amin'ny teny sy ny teny
Minimal Pair (Phonetics)
Inona ny vokatra vita amin'ny Bathtub?
Inona no atao hoe Epifania?
Ny tranga iraisana (Grammaire)
Inona no tantara? Sary famaritana
Top Funny Sites mba hovakiana isan'andro
Firy ny isan'ny mpifidy no mila mandresy?
Ny fivavahana amin'ny Opium an'ny vahoaka
Fanadihadiana momba ny Tandrefana Wechsler
Ahoana ny fomba fanaovana pensilihazo
Top 3 Quotes and Speeches Shylock
Roman Architecture sy Monuments
Iza avy no Atlas, Titanika Grika-Romanina?
Ahoana no hiarovanao tena amin'ny fanafihana mahery vaika?
Fahalemena mampihorohoro, Inkubus sy Succubus
René Magritte: Ny Fitsipika Mahafinaritra
Ahoana ny fijerin'ny Kolontsaina Shinoa ny alika?
Fifanakalozan-kevitra Dialogues - Mangataha toro-làlana
Manana zo hilalao ve ny Singles on the Golf?
20 Album d'album de pièces de l'année, 2000-2009
Ny tantaran'i Anne Bonny
Ny tantaran'i J. Cole: Biographie
Top 8 Free Online Style Guide amin'ny teny Anglisy
21 amin'ireo mpamono mahafaty malaza indrindra amin'ny tantara
18 mpitsidika an'ny Disney izay nanamboatra saha tendrombohitra
Ahoana ny fomba hitsarana ny lalànan'i Morgan